ट्युसन हिँडेकी किशोरीको कसरी भयो हत्या ? • raradiodarpan.com
ट्युसन हिँडेकी किशोरीको कसरी भयो हत्या ?
परीक्षा आउन लागेकाले स्कुलमा बिहानदेखि ट्युसन कक्षा चलिरहेको थियो। १० बजे विद्यालय सुरु हुने भएकाले कविता पनि बिहानै अतिरिक्त कक्षा लिन उज्यालो हुन नपाउँदै पुग्ने गर्थिन्। स्थानीयवासीले कवितालाई बिहान ७ बजे खोला किनारामा मृत अवस्थामा देखेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरमा खबर गरेका थिए। बालिकाको टाउको, अनुहार र शरीरका अन्य भागमा चोटपटक लागेको देखिएकाले कुटपिट गरी हत्या गरेको हुन सक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। उनको शव पोष्टमार्टका लागि धरान पठाइएको छ।
उनको पछाडि १७ वर्षीया सरिता ढकाल र भारतको सिक्किम बियुङ घर भई बेलका–३ मा बस्दै आएका १९ वर्षीय बिनोद ढकाल गएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी सुवासचन्द्र बोहोराले बताए। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ढकालद्वयको भूमिका शंकास्पद देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको एसपी बोहोराले बताए। सरिता कवितासँगै पढ्थिन्। सँगै पढ्ने अन्य साथीका अनुसार उनीहरूबीच लामो समयदेखि मनमुटाव थियो। साथीको हत्या आशंकामा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
सरिताको घर कविताको भन्दा १५ मिनेट टाढा छ। उनीहरूको झन्डै १० मिनेटपछि भेट भएको थियो। कवितालाई देखेपछि दुवै जना पछि–पछि खोलासम्म पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको देखिन्छ। सरिता र विनोद विद्यालय नै नपुगेको विद्यालय प्रशासनको दाबी छ।
उनीहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ। स्रोतले उनीहरूलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘मार्ने नियत नभई तर्साउने हिसाबले कुटेका थियौं। मरेको पत्तै भएन।’
प्रहरीका अनुसार उनीहरूले योजना बनाएर हत्या गरेको देखिन्छ। सरिताले बिहानै कवितालाई फोन गरेर बोलाएकी थिइन्। घटनास्थल विद्यालयबाट करिब ७ सय मिटर र घरबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा पर्छ।
कविता दुई छोरीमध्ये कान्छी थिइन्। उनीहरूका एक भाइ छन्। खेतीकिसानी र मिस्त्री काम गरी कृष्णले छोराछोरीलाई पढाइरहेका थिए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गणेश बस्नेतले कविता अनुशासित र मेहनति छात्रा भएको स्मरण गरे।